Juunyo | 2017 | WEEJIDOW
DAAWO: XILDHIBAANADA DIGIL IYO MIRIFLE OO NOQDEY XILDHIBAANADII UGU HOREEYEY EE DEEGAANADOODA KA FURA XAFIIS XILDHIBAAN ….
Juunyo 30, 2017
War deg deg ah: Qarax xoogan oo goor dhow kadhacay duleedka Muqdisho laguna dilay sargaal sare
Qarax Gaari ayaa ka dhacay Ex-control Afgooye ee magaalada Muqdisho, sida uu warbaahinta u sheegay Sarkaal ka tirsan Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Qaraxan ayaa waxaa Gaarigiisa loogu xiray Sarkaal ka tirsan Ciidanka xoogga dalka, kaasi oo lagu magacaabo Ismaaciil Danab, isaga oo keliya ayaana ku geeryooday.
Jugta Qaraxa ayaa waxaa laga maqlay Agagaaarka goobta uu ka dhacay, waxaa sidoo kale bur bur xoogan uu soo gaaray gaarigii uu watay Sarkaalka.
Sarkaalka la hadlay Idaacaddaha ayaa sidoo kale sheegay in Ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano lagu raadinayo raggii ka dambeeyay falkan lagu qaarijiyay Marxuum Ismaaciil Danab.
Adeegga Gaadiidka deg dega ah ayaa goobta uu Qaraxa ka dhacay soo gaaray, kaasi oo goobta ka qaaday Meydka Marxuum Ismaaciil Danab.
Ururka Al-shabaab ayaa inta badan sheegta Qaraxyada nuucaan oo kale ah ee lala beegsado Saraakiisha Ciidamada Dowladda Federaalka, kana dhaca magaalada Muqdisho.
Barkhanimadii hore ee saakay ayaa waxaa Qarax Miino kolonyo ka tirsan Ciidanka AMISOM lagula eegtay wadada Warshadaha ee magaalada Muqdisho, kaasi oo haleelay mid ka mid ah Gawaaridooda.
DAAWO: Wasiir Fiqi oo DFS Xog ka siiyay Sida ay Roobow ula heshiin karaan & Arinta Axmed Godane
WAAJIDPRESS – 29 JUN 2017:
Wasiirkii hore ee Gaashaandhiga ee DKMG Somalia, Dr. Cabdixakiim Xaaji Maxamuud Fiqi (oo Ka soo jeeda BEELWEYNTA DIGIL IYO MIRIFLE) ayaa ka hadlay suurtagalnimada in Sh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur iyo soo bandhigidii Shabaab ee wajiga Hogaamiyahoodii Axmed Madoobe.
Fiqi ayaa bixiyay xogta dhabta ah ee ka dambeysay in Mukhtaar Roobow laga saaro liiska dadka uu doonayo Mareykanka – DAAWO:
DAAWO: Bandhiga Nadaara Oo Lagu Cadeeyey Cidda Kadanbeysa Mooshinka RW Kheyre ee Baarlamaanku Wadaan
Juunyo 29, 2017
Magaaladda Muqdisho waxaa ka soconaya kulamo ay yeelanayaan xildhibaano la sheegay iney 8-da bisha July mooshin ka keeni doonaan RW Xasan Cali Kheyre.
Mooshinkan ayaa waxaa wada tiro xildhibaano ah kuwaas oo leh dano gaar ah oo ay ugu horeyso iney xilal ka waayeen xukumadda cusub – DAAWO:
War hadda soo dhacay: Askar ku dhimatay qarax ka dhacay duleedka Magaalada Muqdisho
Dhawr askari, ayaa ku dhintay, tiro kalana way ku dhaawacantay, ka dib markii barqanimadii maanta gaari ay la socdeen qarax lagula eegtay duleedka Magaalada Muqdisho.
Gaarigan oo noociisu Cabdi Bille lagu sheegay, ayaa waxaa qaraxaasi lagula eegtay Deegaanka Tarey Disho, gaar ahaan agagaarka dabaqa DBG amaba Cumar Fiyaasko.
Qaraxan, ayaa burbur soo gaarsiiyay gaarigaasi, waxaana goobtaasi ku dhimatay ugu yaraan saddex askari, halka tiro kalana ay ku dhaawacantay.
Goobjooge-yaal, ayaa sheegay in ciidan gurmad ahaa oo goobtaasi soo gaaray, ay gacan u fidiyen askartan, oo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka.
Ciidamada oo hawlgal ka sameeyay Tarey Disho, ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen toban qof, oo la tuhunsan yahay in ay wax ka ogaayen qaraxaasi.
Gawaarida ay wataan Ciidamada Dowladda, isla-markaana ku socdaalaya wadada dhirirsan ee xiririisa Magaalada Muqdisho & Degmada Afgooye, ayaa xilliyada qaarkood qaraxyo lagula eegtaa wadadaasi.
DAAWO: DOWLAD GOBOLEEDKA KOONFUR GALBEED OO MAANTA XAFLAD CIIDANKEEDA KU ABAAL – MARINEYSEY KU QABTEY BAYDHABO
Juunyo 28, 2017
War deg deg ah: XILDHIBAANO CUSUB OO KU BIIREY MOSHINKA LAGU RIDAYO RA’ISUL WASAARE KHEYRE
Warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in weji cusub uu yeeshay mooshinkii ka dhanka ahaa Ra’iisu lwasaare Xasan Cali Kheyre oo loo maleynayey markii hore mid si hoose loo xalliyey.
Warar ay si hoose ayaa ayaa sheegaya in hadda mooshinka uu yeeshay weji cusub oo lama filaan ah, waxaana la sheegayaa in xildhibaanno cusub kusoo biireen.
Xogtu waxay tilmaameysaa in hadda xildhibaanno ka mid ah Digil iyo Mirifle ama K/galbeed ay mooshinka soo galeen oo taageereen in meesha laga saaro Kheyre.
Mashquul badan ayaa laga dareemayey maalmahan dambe guud ahaa Villa Soomaaliya, waxaana la doonayaa in la baajiyo Mooshinkaan.
Kheyre wuxuu la kulmay qaar kamid ah beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa isaga mooshinka ka keenay si uu u qanciyo.